Portection & Sealant - Pro Car Beauty
PRO - ကားရေဆေး ဆေးပစ္စည်းဖြန့်ချိရေး မှ ကြိုဆိုပါတယ်
ဖုန်း - ၀၉ ၄၂၁၁ ၄၁၈၁၇၊ ၀၉ ၄၂၁၁ ၄၁၈၂၈
Portection & Sealant
Cleaness & Degreaser (water-base)
Cleaness & Degreaser (solvent-base)
Air Freshenners & Deodourise
Car Beauty Clean Tools
BODY GLOSS - ကားဘော်ဒီ အရောင်ခြယ် ဆေးရည်
ကားဘော်ဒီ အရောင်ခြယ်ဆေးရည်ဟာ ဖယောင်းတိုက်ပြီးတဲ့ ကြွေမျက်နှာပေါ်ကို မှုတ်ဖြန်းကာ ဖယောင်းမြှေးကို အမြန်ခဲစေသည် ့အပြင် ဖယောင်းမြှေးရဲ ့အနေအထားကို ညီညာပြန် ့နှံ့စေတယ်။ ဆီကွက် ၊ ဖုံကွက်တွေကပ်တာကို ရှောင်ရှားပြီး အလင်းရောင်ကိုလဲ အများကြီး တိုးစေတယ်။
Hyper Coat Pro - DuPont ခေတ်မှီသိပ္ပံကာကွယ်မြှေး
ကားလောက ဖုတ်ကြွေသုတ် နယ်ပယ်မှာ DuPont ဟာ ကမ ္ဘာ မှာ နာမည်ကြီး တည်ထွင်သူဖြစ်တယ်။ DuPont ဆိုတာ သိပ္ပံဆေးအမျိုးမျိုးရဲ ့တည်ထွင်သူဖြစ်တယ်။ ဥပမာ DuPont ရဲ့တည်ထွင်မှုတိုင်းက ဆန်းပြားတဲ့သိပ္ပံကို ထပ်တခါ ပေါ်ပေါက်စေခဲ့တယ်။ Hyper Coat pro ဟာ PuPont ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် ကြွေသုတ်ဆေး အထူးခေတ်မီ သိပ္ပံကာကွယ်မြှေး ဖြစ်တယ်။ မှန်နဲ့ပိုလီတက်ထရာ ဖလူအိုရိုအီလီသင် တို့နှင့် ပေါင်းစပ်ကာ ခိုင်မာတဲ့ စပလိမ်ဓာတ်ပါတဲ ့ဖွဲ ့စည်းသောအလွှာဖြစ်တယ်။ မှန်ဓာတ် ၊ ကီတုန်း ၊ သစ်ပင်ဆီ ၊ ဓါတ်ပြောင်းပုံဆီလီကွန် စသောပိုလီတက်ထရာဖလူအိုရို အီသီလင်နှင် ့ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပေါ်သော ဒြပ်ပစ္စည်းလိမ်းဆေးဖြစ်တယ်။ ကားချစ်သူတွေအဖို ့အဆင့်မြင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ဆေး တလွှာတိုးလာတာပေါ့။
Q Nano Protection - Q ဖလူအိုရိုက် ကြိုတင်ကာကွယ်ဆေး
Q ဖလူအိုရိုက် ကြိုတင်ကာကွယ်ဆေးဟာ အရောင်တင်ပြီးတဲ့ ကြွေမျက်နှာပြင်ကို အလုံပိတ်ကာကွယ်ပြီး စူပါရေပက်ခံနိုင်ရေးနှင့် လွန်စွာအလှအပကို တာရှည်ကာကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သံုးနည္း။ ။ မသုံးမီသမအောင်ခါပါ။ ထို့်နောက် ကြွေမျက်နှာပြင်ကို ဆီချွတ်ပါ။ သန့်ရှင်းနူးည့ံသော ပိတ်ကိုသုံးပြီး စက်ဝိုင်းပုံစံ Q ဖလူအိုရိုက် ကြိုတင်ကာကွယ်ဆေးကို ခြောက်သွေ့သော ကြွေမျက်နှာပြင်ပေါ် ပါးပါးထပ်သုတ်ပါ။ ပြီးရင်ဆေးကိုခြောက်အောင်ထားပါ။ ထို ့နောက် နူးညံ ့သော စူပါချည်မျှင်ငယ်ဖြင် ့တောက်ပြောင်အောင် သုတ်ရင်ရပြီ။
Wax & Polish (14)
Rail And Transport (3)
Portection & Sealant (11)
Cleaness & Degreaser (solvent-base) (1)
Cleaness & Degreaser (water-base)	(7)
Car Beauty Clean Tools (4)
Air Freshenners & Deodourise (4)
ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုပြုလုပ်ရန် PRO ကိုဆက်သွယ်ပါ
၀၉-၄၂၁၁-၄၁၈၁၇ Contact Us
လူကြီးမင်းတို့၏ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ PRO CAR BEAUTY SALON မှ ဝမ်းမြောက်စွာ ကြိုဆိုပါသည်။ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု အသေးစိတ်ကိုသိရှိရန် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ။
Car Polishing, Car Beauty နှင့် Car Cleaning သင်တန်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ PRO CAR BEAUTY SALON မှ လက်ခံ သင်ကြားပေးနေ ပါသည်။ သင်တန်းအကြောင်းအရာ အသေးစိတ်ကို သိရှိရန် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ။
Copyright © 2022 Pro Car Beauty Saloon. All Rights Reserved. Developed by OrientWebs